Exodus 2 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Wɔwoo Mose (1-4)
Farao babea faa Mose de no yɛɛ ne ba (5-10)
Mose guan kɔɔ Midian, na ɔwaree Sipora (11-22)
Onyankopɔn tee Israelfo no apinisi (23-25)
2 Saa bere no ara mu, ɔbarima bi a ofi Lewi fi kɔwaree Lewini bea bi.+ 2 Ɔbea no nyinsɛn woo ɔbabarima, na bere a ohuu sɛnea abofra no ho yɛ fɛ no, ɔde no siei abosome abiɛsa.+ 3 Afei ohui sɛ ɔrentumi mfa no nsie bio,+ enti ɔfaa mmɛw* kɛntɛn* de kootaa ne amane yɛɛ ho, na ɔde abofra no too mu de no kɔhyɛɛ nwura* mu wɔ Asubɔnten Nil ho. 4 Ɛnna ne nuabea+ kogyinaa baabi hwɛɛ nea ɛbɛto no. 5 Afei Farao babea baa Asubɔnten Nil ho sɛ ɔrebeguare, na na mmea a wɔsom no no nenam Nil no ho. Ohui sɛ kɛntɛn bi hyɛ nwura no mu wɔ nsu no ano. Ɛhɔ ara na ɔsomaa n’abaawa sɛ ɔnkɔfa mmra.+ 6 Obuee so no, ohui sɛ abarimaa no da mu resu. Na ɔyɛɛ no mmɔbɔ, na ɔkae sɛ: “Hebrifo mma no bi ni.” 7 Ɛnna ne nuabea no bisaa Farao babea no sɛ: “Menkɔfrɛ Hebrifo mmea no bi na ɔmmɛma no nufu na ɔnhwɛ no mma wo anaa?” 8 Ɛnna Farao babea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔ!” Ntɛm ara na abeawa no kɔfrɛɛ abofra no maame bae.+ 9 Afei Farao babea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Fa abofra yi kɔhwɛ no ma me, na metua wo ka.” Enti ɔbea no faa abofra no kɔhwɛɛ no. 10 Abofra no nyinii no, ɔde no kɔmaa Farao babea no, na ɔde no yɛɛ ne ba.+ Ɔtoo no din Mose* na ɔkae sɛ: “Nsu mu na miyii no fii ntia.”+ 11 Afei bere a Mose nyinii* no, ofii adi kɔɔ ne nuanom nkyɛn kɔhwɛɛ sɛnea wɔhyɛ wɔn ma wɔyɛ adwumaden;+ na ohui sɛ Egyptni bi rehwe ne nuanom Hebrifo no mu baako. 12 Bere a ɔhwɛɛ ha ne ha a ohui sɛ obiara nni hɔ no, ɔbɔɔ Egyptni no kum no, na ɔde no hyɛɛ anwea mu.+ 13 Ade kyee a ofii adi no, ohui sɛ Hebrifo baanu bi reko. Enti obisaa nea odi fɔ no sɛ: “Adɛn nti na wo ne wo ara wo ho nipa reko?”+ 14 Ɛnna obisaa no sɛ: “Hena na ɔde wo sii yɛn so sɛ di yɛn so na bu yɛn atɛn? Wopɛ sɛ wukum me sɛnea wukum Egyptni no anaa?”+ Ɛmaa Mose bɔɔ hu na ɔkae sɛ: “Ei, asɛm yi apue!” 15 Akyiri yi Farao tee asɛm no, na ɔyɛe sɛ obekum Mose, nanso Mose guan fii Farao anim kɔɔ Midian+ asaase so, na ɔkɔtenaa abura bi ho. 16 Ná ɔsɔfo a ɔwɔ Midian+ no wɔ mma mmea baason, na wɔbae sɛ wɔrebɛsaw nsu de akogu ade mu ama wɔn papa nguan anom. 17 Nanso sɛnea na ɛtaa si no, nguanhwɛfo bi bɛpam wɔn. Ɛnna Mose sɔre boaa* mmea no, na ɔmaa wɔn mmoa no nsu. 18 Bere a wɔkɔɔ wɔn papa Reuel*+ nkyɛn wɔ ofie no, ɔteɛɛm sɛ: “Ɛnnɛ de ɛyɛɛ dɛn na moaba fie ntɛm saa?” 19 Ɛnna wobuae sɛ: “Egyptni+ bi na ogyee yɛn fii nguanhwɛfo no nsam. Ɔsan saw nsu mpo maa yɛn, na ɔmaa nguan no bi nomee.” 20 Obisaa ne mma mmea no sɛ: “Ɔwɔ he? Adɛn na moagyaw no wɔ hɔ? Monkɔfrɛ no na ɔne yɛn mmedidi.” 21 Na Mose penee so sɛ ɔbɛtena ɔbarima no nkyɛn, na ɔde ne babea Sipora+ maa Mose aware. 22 Akyiri yi, ɔbea no woo ɔbabarima, na Mose too no din Gersom,*+ efisɛ ɔkae sɛ: “Mabɛyɛ ɔhɔho wɔ ananafo asaase so.”+ 23 Mfe* pii akyi no, Egypt hene no wui,+ nanso nkoasom no nti, Israelfo no kɔɔ so sii apini, na wosu hwehwɛɛ ɔboafo, na wɔn sufrɛ no duu nokware Nyankopɔn no asom.+ 24 Eduu baabi no, Onyankopɔn tee wɔn apinisi+ no, na Onyankopɔn kaee apam a ɔne Abraham, Isak, ne Yakob yɛe no.+ 25 Enti Onyankopɔn hwɛɛ Israelfo no, na Onyankopɔn huu nea wɔrefa mu.
^ Anaa “adaka.”
^ Anaa “demmire.”
^ Ɛkyerɛ, “Woyii No Fii Nsu Mu,” kyerɛ sɛ, wogyee no fii nsu mu.
^ Anaa “bere a Mose renya ahoɔden.”
^ Anaa “twitwa gyee.”